Wararka ciyaaraha (I). Ku ciyaar PSP-ka Android? | Androidsis
Zack | | Ciyaaraha Android, Noticias, Sony
Android wuxuu ku korayaa boodbood iyo soohdin, dhammaanteen waan ognahay taas. Y Qeybta sii kordheysa ee ugu badan ee Android waa shaki la'aan ciyaaraha fiidiyowga. Kama sii yaabinno inaan ku aragno ciyaaro ku saabsan Android oo leh tayada qalabka la qaadan karo iyo haddii aan aragno waxa mustaqbalka la yeelan doona Nvidia Tegra 3 waxaan si fudud u dhadhamin karnaa.
Sony waxay ogaatay kororkaan qeybta ciyaarta fiidiyowga. Waxay horeyba u sameysay sii deynta Xperia Play, iyadoo soo bandhigeysa fikradda ah "console-phone" haddana waxay mar kale sameysaa. Sida, Sony ayaa sii deyn doonta noocyada ciyaaraha fiidiyowga ee PSP dhammaan qalabka Android.
Xilligan la joogo waxaa jira liis yar oo la soo saaray oo ciyaaro ah:
Siphon Filter: Muraayad Madoow
Bowling Xawaare Sare
Kulayl Kulul Golf
Liistada qalabka Sony ee shahaado laga siin doono inay soo dejiso oo ay ciyaaraan ciyaaraha PSP ee loo sii daayay qalabkooda ayaa sidoo kale la daabacay:
Kiniiniga Sony S
Xperia Acro (Japan)
Smartphone-ka cusub: Xperia S iyo Xperia ion.
Tallaabadan ay qaaday shirkadda Sony waxay umuuqataa mid guuleysatay, iyadoo ka faa’iideysaneysa “boomka” ay Android ku haysato ciyaaraha fiidiyowga. Waxaa intaa dheer, waxaan ku dhiirranayaa in aan idhaahdo Sony way guuleysan doontaa, ilaa iyo inta: Sony dejiso qiime macquul ah, marka loo eego ciyaaraha intiisa kale ee aan ka helno Suuqa Google, oo kaliya ha ku ekeynin qalabkaaga Android, sidoo kale u diyaari qalabka kale iyo soosaarayaasha.
Waa maxay fikirkaagu Miyaad jeceshahay fikradda ah inaad ku ciyaarto kulammada aad jeceshahay PSP ee Smartphone ama Tablet?
Fuente: ciyaarta playstationlifestyle
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Ciyaaraha Android » Wararka cayaaraha (I). Ku ciyaar PSP-ka Android?
Gameloft waxay fidin doontaa timaheeda, mar dambe ma awoodi doonto inay "nuquliso" ciyaaraha ugu guusha badan hee hee hee
JF QUDBADII dijo
waxa aan aniga igu habboonayn ayaa ah in liistada ay soo baxdo iyada oo aan la ogaanin… maadaama aanu jirin ciyaar aan la shaacin oo ku saabsan psp, laakiin ay tahay psvita….
Jawaab JF SAINTS
Runtu waxay tahay inay war wanaagsan u tahay dhammaanteen kuwa saacadaha iyo saacadaha ku lumiya taleefannada casriga ah. Maxay haa tahay, sidoo kale shaki ayaan wali ku jiraa. Waxay ila tahay aniga oo kaliya processor-rada afar geesoodka ah in lagu daydo karo cayaaraha PSP, iyo, xaaladaha ugu fiican - haddii ay awoodo -, Sony hubaal waxay dooneysaa inay kaligood keli ahaato qalabkeeda.
Waxaan rajeyneynaa inay soosaaraan nooc cusub oo sony ah, oo soojiidasho leh oo kudayan kara ciyaaraha ps vita ama xitaa psp
Ku jawaab Difonia
waxa ugu fiican shaxanka ayaa ah in aanan aqoon lumia ama psp xpiria
Ku jawaab nayeb
Faylal badan ku soo rar daruurta adigoo adeegsanaya Box iyo ES Explorer